IED explosion kills civilians in southern Somalia – Garowe Online | Somalia News
Eedo musuq-maasuq iyo caddaalad darro oo hareeyey kursiga beesha Awbakar Gaabane
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa soo baxaya eedeo la xiriira caddaalad darro lagu sameeyey kursiga ay beesha Awbakar Gaabane ee Harti-Abgaal ku leedahay baarlamanka maamulka HirShabeelle, oo dhismihiisa uu hadda socdo. Kursiga ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan kasoo jeeda jufada Cali Yacquub oo ka mid ah afarta jufo ee beesha Awbakar Gaabane, ayada oo saddexda kale ay yihiin; Xasan Yacquub, Axmed Yacquub iyo Khajafweyn. Sida ay tahay nidaamka wax qeybsiga jufooyinka, ee ah in la wareejiyo kuraasta, waxaa qorshuhu ahaa in kursigan aysan kusoo laaban beesha Cali Yacquub maadaama ay ku fadhiyeen afar sano, sidaas darteedna la siiyo saddexda beel ee kale midkood. Jufada Xasan Yacquub, waxay ku fadhisaa kursiga xildhibaanka federaalka oo uu haysto wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Waxay sidoo kale Jufadan haysataa agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha oo uu kasoo jeedo Dhagaxtuur. Sidaas darteed, waxay ahayd in Imaamka Mudulood, Imaam Maxamed Yuusuf oo isna kasoo jeeda jufada Xasan Yacquub, uu kursigan siiyo Axmed Yacquub ama Khajafweyn midood, hase yeeshee waxaa lagu warramay inuu go’aamiyey in lagu celiyo beesha Cali Yacquub. Odayaal ka tirsan Axmed Yacquub iyo Khajafweyn, oo lasoo xiriiray Caasimada Online, ayaa sababta sidan loo sameeyey ku sheegay inay tahay in jufada Cali Yacquub aysan Xasan Yacquub ku qabsan kursiga xildhibaanka federaalka, oo loo tartamayo dhowaan. Waxay sidoo kale sheegeen in arrintan uu ku lug leeyahay wasiir Ducaale. Odayaasha ayaa nasiib-darro ku tilmaamay in Imaamka uu caddaalad fali waayo beeshii uu kasoo jeeday, waxayna is-weydiiyeen sida uu ugu caddaalad fali karo Mudulood, haddiiba uu sidan ku dhex sameeyey beeshiisa. Caasimada Online oo isku dayday inay la xiriirto Imaamka iyo Ducaale, si ay wax uga weydiiso arritan uma suurta-gelin.
Golaha Wasiirada cusub oo kulankoodii ugu horeeyey iskugu yimid (Sawirro)
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp - Advertisement - a’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan xubnaha golaha Wasiirada ee maanta la dhaariyay. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka horyaala Golaha Wasiirrada iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ah, si loogu guuleysto ka miro dhalinta qorshaha xukumadda ee ku salaysan ku u adeeggidda bulshadda iyo sareysta sharciga . Ra’iisul Wasaaraha ayaa kula dardaarmay Golaha Xukuumadda in si dhaqso ah ay shaqooyinkooda u guda galaan, xilalkana ula wareegaan, si looga faa’iideysto waqtiga haray, loona fuliyo qodobadii ku jiray barnaamijka Xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey. “Waxaa Alle mahadii ah inaan yeelanay kulankii ugu horeeyey kadib markii maanta la dhaariyay golaha cusub, waxaana idinka rajeynayaa inaad xilalka si deg deg ah ula wareegtaan, si looga faa’iideysto waqtiga haray”.ayuu yiri R/W Maxamed Xuseen. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement - Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Isbadal ku sameeyay taliyaal katirsan Ciidanka Milatariga
IED explosion kills civilians in southern Somalia – Garowe Online
IED explosion kills civilians in southern Somalia Garowe Online
Previous articleMasuuliyiin Mareykan ah oo Muqdisho kula kulmay Madaxda Maamul goboleedyada Qaar (Sawirro)
Next article‘Tottenham are where Bale wants to be’ – Welsh agent confirms talks between Real Madrid and Spurs
Ra’iisul Wasaare Rooble oo uga mahadceliyey Xildhibaannada ansixinta Golaha iyo Qorshaha Xukuumadda
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo Golaha Shacabka horgeeyey xubnaha cusub iyo Qorshaha Golaha Xukuumadda ayaa xusay in barnaamijka Xukuumaddu ay saldhig u yihiin arrimaha hortabinta u leh dalka oo ay ugu horrayso qabsoomidda doorashooyinka, adkeynta amniga, horumarinta caddaaaladda, dowlad-wanaagga, kordhinta adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay wadajir ugala shaqeynayso Dowladaha Xubnaha ka ah DF iyo shacabka Soomaaliyeed suggida aminga xilliga Doorashadda, Iyadoo laga amba-qaadayo go’aanadii ka soo baxay shirarkii Samareeb iyo midkii ka danbeeyey ee Golaha Wadatashiga Qaranku ay ku heshiiyeen Muqdisho, 17kii Sebtember 2020, laguna qeexayay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, deegaan doorashada, qoondada haweenka iyo in ay doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigooda. “Xukuumadda oo kaashaneysa Dowladaha Xubnaha ka Ah DF, waxay dardar-gelinaysaa dadaallada dhammaystirka dib-u-eegista Qorshaha Amniga ee xilligan muhiimka ah. Waxa aan shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin-doono shacabka, hay’adaha dowladda iyo ciidamada amnigu fursad ay si wadajir ah u sugayaan xasilloonida iyo nabadda dalka”. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa uga mahadceliyey Golaha Shacabka ansixinta Xukuumadda iyo barnaamijkeeda, si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo, isagoo tilmaamay in Xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah qeybaha bulshada ee nugul. PUNTLAND POST Let’s block ads! (Why?)
Baarlamaanka Soomaaliya Oo Ansixiyey Xukuumada Rooble – VIDEO
[embedded content] Kulan ay maanta xaruntooda KMG ee Villa Hargeysa ay ku yeesheen mudanayaasha golaha shacabka, uuna shir gudoominayey gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa raysal wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble waxaa uu golaha horkeenay xukuumadiisa, isagoo waydiistay in ay kalsoonida siiyaan. Raysal Wasaare Rooble ayaa xusay in xukuumaddiisu ay diiradda saari doonto dardargalinta hawlaha doorashada, amniga goobaha doorashadu ka dhacayso, la dagaalanka cudurka Covid-19, adeegga bulshada, cadaaladda iyo dawlad wanaagga. Sidoo kale Xukuumadda ayuu xusay inay mudnaan gaar ah siindoonto ilaalinta xuquuqul insaanka, gaar ahaan difaaca Haweenka iyo carruurta, iyadoo la xoojinayo wada-shaqaynta hay’adaha u xilsaaran difaaca dhibanayaasha. “Xukuumadda oo kaashaneysa Dowladaha Xubnaha ka Ah DF, waxay dardar-gelinaysaa dadaallada dhammaystirka dib-u-eegista Qorshaha Amniga ee xilligan muhiimka ah. Waxa aan shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin-doono shacabka, hay’adaha dowladda iyo ciidamada amnigu fursad ay si wadajir ah u sugayaan xasilloonida iyo nabadda dalka”. RW Rooble Mudanaayasha golaha shacabka ayaa codka kalsoonida u qaaday xukuumadda cusub, waxaana ogolaaday 188-mudane, mana jirin cid ka aamustay ama diiday, sida uu ku dhawaaqay Gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan. Golaha wasiirada oo ka kooban 27-wasiir, 17-wasiir dawle iyo 26-wasiir ku xigeen oo uu Ra’iisal wasaaraha dalka magacaabay 19-kii bishan ayaa lagu hor dhaariyey golaha shacabka, waxaana ay dhawaan xubnaha ku cusub xukuumaddu ay la wareegi doonaan xilal kooda. Ugu dambayn Raysalwasaare Rooble ayaa uga mahadceliyey golaha shacabka ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda, si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo, isagoo tilmaamay in Xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah qeybaha bulshada ee nugul. Horseed Media